Proverbe 525 Angaha noheverin-ko faty aho no nariana tamin' ny aretina ? [Rinara 1974 #256]
Proverbe 621 Ao am-bava ny aretina ka fidio ny teny havoaka . [Rinara 1974 #314]
Proverbe 668 Aretim-bilany . [Veyrières 1913 #4463]
Proverbe 669 Aretina tsy miohatra ny boka , biby tsy miohatra ny mamba . [Veyrières 1913]
Proverbe 705 Ataony ho aretin’ inona, ka hoe : "Hohaniko ny sisan’ Ikaky ". [Veyrières 1913 #1491, Cousins 1871 #302]
Proverbe 803 Aza atao aretin' alika , ka vitan-delaka ihany. [Rinara 1974 #377]
Proverbe 1090 Aza manao maso mila aretina, mitady teny mihilana. [Veyrières 1913 #2066, Cousins 1871 #482]
Proverbe 1525 Aza tafandry manana aretina . [Houlder 1895 #1996]
Proverbe 1649 Be no te-ho Rasalama , fa tsy avelan' ny aretina . [Veyrières 1913 #841, Rinara 1974 #878, Cousins 1871 #757, Houlder 1895]
Proverbe 1710 Boka misikidy : ny tokin' aina dia lavorary fa ny aretina no manapa-kozatra . [Rinara 1974 #63]
Proverbe 1802 Didimaso tsara ondana ka matory manana aretina . [Rinara 1974 #992]
Proverbe 1849 Dridra lava toy ny aretin- tSoamanaraka . [Veyrières 1913 #2785]
Proverbe 1994 Fanefitra tsy mahafaka aretina . [Veyrières 1913 #73, Cousins 1871 #924]
Proverbe 2306 Harika maty jiro (maizina ) ka aretim- ponao no vokany. [Rinara 1974 #1282]
Proverbe 2540 Ilaozanao mbola tsy manaritra aho, ka hanina anao no androatokon' aretina . [Rinara 1974 #1396]
Proverbe 2826 Kamo tia torimaso : tsy aretina fa mosavy tenany ihany. [Rinara 1974 #1594]
Proverbe 2878 Ketraka ny henjana fa eo an-dohalika ny aretina . [Rinara 1974 #1629]
Proverbe 2895 Kibo malain-kanan-dratsy : mandraky ny efa ho faty , ka mbola mandroso aretina ihany! [Rinara 1974 #1641]
Proverbe 3235 Mafanafana , toy ny aretin’ andriana . [Veyrières 1913 #208, Rinara 1974 #1828, Cousins 1871 #1393]
Proverbe 3586 Manao ondry tsy harena , ka misorona ondry boka. [Houlder 1895 #82, Cousins 1871 #1553]
Proverbe 3855 Marary mahatelin-kanina , ka ny aretina koa mila tohany. [Rinara 1974 #2134]
Proverbe 3971 Maty tsikelikely toy ny aretin- dRenivalala . [Veyrières 1913 #2811, Cousins 1871 #1669]
Proverbe 3994 Matory manana aretina toa didimaso . [Rinara 1974 #2195]
Proverbe 4209 Mikatsakatsaka eran' izao loha rehetra izao, dia mahasitrana aretina an-doha ny sakamalao . [Veyrières 1913]
Proverbe 4230 Milambam-bary hoatry ny aretin' Imamo , ka ny sisa tsy maty be kibo . [Veyrières 1913 #2881]
Proverbe 4375 Mitango aretina , mitango lalitra . [Veyrières 1913 #3941]
Proverbe 4417 Mitomany takon' ny olona : aretina an-doha no hita. [Veyrières 1913 #2632]
Proverbe 4980 Ny aretina tsy maha-lehilahy . [Houlder 1895 #1993, Veyrières 1913 #2819]
Proverbe 5028 Ny fahadalana hoatry ny aretin' androbe : vory vahoaka , vao manala baraka. [Veyrières 1913]
Proverbe 5079 Ny faty mpanazakazaka ary ny aretina vadin-koditry ny olombelona . [Houlder 1895 #2095, Rinara 1974 #2975]
Proverbe 5200 Ny iray alobotra tsy mahafatifaty , ny iray alofisaka tsy mahamailamailaka , ka aza mifanebaka fa samy aretina . [Rinara 1974 #3037]
Proverbe 6078 Raha maloiloy mamy , tsy dikidiky fa aretina . [Rinara 1974 #235]
Proverbe 6571 Sikidim-boka , ny tohan' aina : miziriziry , ny aretina toa hanapa-kozatra . [Rinara 1974 #3878]
Proverbe 6918 Tao ny vaha-loha , fa ny aretina no tsy mamela mahazo . [Rinara 1974 #4115]
Proverbe 7114 Toy ny aretina ny alahelo : ao ny morainy , ao ny sarotiny . [Cousins 1871]
Proverbe 7115 Toy ny aretin’ omby ny teny: izay mirehodrehoka ihany no ifindrany . [Cousins 1871]
Proverbe 7238 Tomany eo imasony, toa mila fitia noho iza, tomany takona aretina an-doha no azo (fa tsy hitany). [Rinara 1974 #4170]
Proverbe 7726 Tsy misy aretin- dratsy ohatra ny nendra , fa namoizako ny olo-malala . [Rinara 1974]
Proverbe 8288 Voin-kava mahatratra, ny aretin- tsy lazaina mahafaka adidy . [Rinara 1974 #5009]
Proverbe 8289 Voin-tenanao tsy namangy , fa ny aretiko sitran-tsy miody . [Rinara 1974 #5010, Cousins 1871 #3721]